Tag: mbadamba nkume | Martech Zone
Tag: mbadamba nkume
Otu anyị si eri afọ ojuju site na ụdị
Monday, November 12, 2012 Satọdee, Nọvemba 10, 2012 Jenn Lisak Golding
Anyị na onye na-ebipụta akwụkwọ ntanetị dijitalụ anyị, Zmags rụkọrọ ọrụ, iji mepụta ihe omuma a mara mma ma nwee nghọta maka otu anyị si eri ọdịnaya site na ụdị dịka ndị ahịa. Fọdụ nchọpụta achọpụtala ihe m maara, ebe ndị ọzọ juru. Agbanyeghị, ozi n'ozuzu ya bụ na ọdịnaya gị kwesịrị ịdị na-agbanwe agbanwe gafee ọtụtụ ngwaọrụ. Olee ot you ui ga-esi mee ya? Ihe a na-achọpụta na arụmọrụ na-arụ ọrụ n'ofe ngwaọrụ. Iji onyonyo na mgbasa ozi bara ụba na-ejidekwa oge elebara anya. Inwe a
Ezigbo Olileanya Na-eweta Afọ Ojuju Ndị Ahịa
Thursday, August 28, 2008 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Kemgbe afọ ole na ole gara aga, arụrụ m ọrụ na mpaghara mmalite teknụzụ nrụgide. Ihe abụọ na-eme n'ezie na mmalite bụ enweghị atụmanya ezi uche dị na usoro ahịa na azụmaahịa yana ịchụpụ maka atụmatụ ọhụrụ dị mkpa maka atụmanya. Nchikota ihe egwu abuo a nwere ike imebi ulo oru gi ma oburu na i dozighi ha ka ha ghara ime ka ha na ndi ahia gi tinyegoro obi ha. Pushing atụmatụ mgbe